Shiinaha SUS304 isku darka 24 madaxa warshad miisaanka badan leh iyo soosaarayaasha | Smart Miisaan
Isku dar ah SUS304 24 wejiher madax wejiga oo dhan
Mashiinka 24 miisaanka miisaanka leh wuxuu isku miisaami karaa oo isku dari karaa 2-8 nooc oo badeecooyin isku waqti ah, badiyaa waa digirta, dalagyada, miraha, khudradda qallalan, cuntooyinka badda qallalan iyo mashaariicda kale ee isku-darka.
Qalabka dhismaha: SUS304
Qaabka Mashiinka: 4 saldhiga saldhiga
Volume Volume: 0.8L / 1L
Nooca Qaybta Xiriirka Cuntada: Saxarada / Gogosha saxanka
Nooca ugu Wanaagsan Shaqada Cone: Feejignaan
Isku dhafka: 4-6 nooc
Fasalka biyuhu: IP65
Nidaamka Xakamaynta: Kontroolka modular
Tirada Ugu Yar: 1 dhigay
SW-M324 multihead weigher wuxuu la socdaa 3 lakab oo goos goos ah: hopper feed, miisaanka miisaanka iyo dhawaaqa xusuusta. Smart Weigh wuxuu leeyahay hal-abuurnimo 3 lakab oo 24 ah miisaanka madaxa ah: miisaanka culeyska ah iyo hipper xusuusta ayaa ka wada shaqeyn doona isku darka culeyska.
Miisaan kala jaad ah
1-200 x6 garaam
1-300 x4 garaam
1-500 x3 garaam
1-800 x2 garaam
Ugu badnaan xawaare
50 kiish / min
10 ”shaashadda taabashada
220V 50 / 60HZ, hal waji
Stepper motor (wadista qunyar socodka ah)
Isku dar ah culeyska madaxa badan ayaa ku habboon noocyada kala duwan ee wax soo saarka, waxay gaari kartaa culeys isla markaana isku qasan kartaa waqti isku mid ah. Meel dhig keydka oo hoos u dhig kharashka dayactirka mashiinka.
• Isku-darka 2-6 nooc oo badeecooyin ah xulasho ahaan, oo ay ku jirto xusuusta xawaaraha sare iyo saxnaan;
• 3 nooc oo miisaan ah oo la heli karo: isku dar ah, mataano & hal xirmo;
• Shaqada qashin-bixinta ee hore loo joojiyo si loo joojiyo xannibaadda;
• Qaybaha taabashada cuntada ee kala daadanaya qalab la'aan, si fudud loo nadiifiyo.
Smart Weigh wuxuu bixiyaa muuqaal 3D u gaar ah (aragtida 4-aad sida tan hoose). Kani waa 3 isku-dhafan 24 miisaan weji-goobeed ah.
Qalabka Xirmooyinka ee Diyaar u ah
Mashiinka xirmada toosan ee miisaanka culus waxay sameyn kartaa bac barkinta ama boorsada gusset. Bacda waxaa sameeya filim duuban.
14 miisaanka madaxa wuxuu ku shaqeeyaa mashiinka wax lagu duubo ee wareegaya. Waxay ku habboon tahay qaabka boorsada horumarsan, sida doypack.
14 miisaanka wejiga wuxuu ku shaqeeyaa mashiinka diidmada. Waxay ku guuleysan kartaa quudinta faaruqinta toosan ee gawaarida, cabbirida auto iyo buuxinta saxamada, otomatiga u dir dirista dhammeystiran qalabka soo socda.
Mashiinka Xirmooyinka Thermoforming / Tray
14 miisaanka miisaanka ayaa ku shaqeeya mashiinka wax lagu duubo oo fidsan
4. Haddii aan u iibsado miisaamidda waxsoosaarka isku-darka, miyaan miisaami karaa 1 shey mustaqbalka?
Haa. Hadday tahay 4 isku miisaanka culus, markaad rabto inaad miisaamto 200g wax soo saar, miisaan kasta oo aad dejiso culeyska la beegsanayo waa 50g. Miisaanka ugu dambeeya waa 200 garaam.
Hore: SUS304 xawaare sare 14 madaxa wejiga wejiga badan
Xiga: SUS304 Heerka 10 madaxa miisaanka badan leh
Nidaamka xakamaynta qaybsan waxaa loola jeedaa nidaamka xakamaynta guddiga. Guddiga hooyadu waxay xisaabiyaan sida maskaxda, mashiinka mashiinka kontaroolada mashiinka shaqeynta. Miisaaniyadda wejiyada badan ee Smart Weigh waxay isticmaashaa nidaamka xakamaynta casriga 3aad. 1 koontaroolka guddiga wadida 1 hipper feed iyo 1 cupper ah. Haddii ay jirto 1 hopper jabtay, ka mamnuuco qoob-ka-baxa shaashadda taabashada. Xaraashka kale wuxuu u shaqeyn karaa sidii caadiga ahayd.
Iyo guddiga wadistu waxay caan ku yihiin taxanaha taxanaha miisaanka 'Smart Weigh'. Tusaale ahaan, maya. 2 guddi wadis ayaa loo isticmaali karaa maya. 5 guddiga wadayaasha. Waxay ku habboon tahay keydinta iyo dayactirka.
isku qas wejiga hore ee wejiga
miisaanka wejiga badan
Mashiinka wax lagu kala qaado oo miisaan badan
Xaqiiqo yar oo sareysa 14 madax miisaan culus weji ...
SUS304 Heerka 10 madaxa miisaanka badan leh
SUS304 xawaare sare 14 madaxa wejiga wejiga badan